Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:00am-3:55pm
Lambarka Taleefanka 617-635-6470
Habka ogolaanshaha khaaska ah
Waxaa kujira qayb xisaabin ah ama qayb soojeedin ah
Boston Arts Academy waa dugsiga sare ee kaliya ee Boston kuyaala oo bixiya waxbarashada farshaxanka muuqaalka ah iyo bandhiga. Yoolkeena ayaa ah inaan diyaarino bulsho kala duwan ee dardargalinta muwaadaniinta aqoonyahaanka farshaxanka inay ku guuleystaan kulliyadooda ama xirfadaha kulliyada ama xirfad taqasus leh ayna kaqayb ahadaan xubnaha bulshadooda. Waxaan raadinaynaa ardayda dareenka xoogan u hayo wax farshaxanka, si wadajir ah ushaqeeyo, oo wax u wada barto bulsho ahaan, oo matalaad kabixinaaya bulshooyinka kaladuwan ee Boston. Hanaanka diiwanagalinta dugsiga waxaa loogu talagalay inuu siiyo dhamaan ardayda fursad ay kumuujiyaan awoodooda, mustaqbalkooda, iyo dadaalkooda.
Dheesha iyo masraxa ardayda waxay u baahanyihiin dhar.